Natural gasi simba rinogadzirawo kusvibisa | Green Renewables
Natural gasi simba rinogadzirawo kusvibiswa
Manuel Ramirez | | Chaizvoizvo Simba
La gasi rechisimba simba inoonekwa nemaziso akanaka sezvo iri pamusoro yakachena yakawanda mafuta kupfuura marasha uye dzimwe nguva inoshandiswa sechinhu chayo chinotsiva.
Asi uyu mukurumbira wakanaka hausi wechokwadi sezvazvinoratidzika sekutaura kwakasiyana siyana nemishumo, umo zvinotsanangurwa kuti simba rinouya kubva kugasi rechisikirwo rinoburitsa sei kusvibiswa kukuru kana nzira yekuitora ichiitwa. Izvo chaizvo painotsva mumuto wekupisa kuti zvinyatso kujekesa nekuti kuburitsa kwayo gasi kwakadzikira panguva iyoyo.
Unofanira kungwarira sei zvimwe zvigadzirwa zvinokosheswa, sezvo isiri iyo chete chikamu chekupedzisira umo kusvibiswa kwakagadzirwa hakusi pachena, asi mune zvese maitiro. Fracking kana hydraulic kutsemuka ndipo chaipo panonyanya kusvibisa nguva yacho.
Fracking inosanganisira mukugadzira zvipuka mudombo kuitira kuti chikamu chegesi chiyerere chokunze uye chinogona kuburitswa zvirinani gare gare kubva mutsime. Pamusoro pezvo, dambudziko nesystem iyi ndeyekuti makemikari anoshandiswa muchikamu chino chegadziriro icho chobva chaburitswa mudenga.
Rimwe rematambudziko akakomba nderekuti inoshatisa mvura yekunwa yepasi pevhu uye inokonzera kubuda kukuru kwe CO2 uye methane, iyo inokanganisa kudziya kwepasi uye shanduko yemamiriro ekunze. Nekuda kwekusvibiswa kwemvura yekunwa yepasi pevhu, zvinoitika kuti hutano hwevagari padyo nemadhamu hunodzikira zvakanyanya kunze kwemarara ayo anoenda mumhepo.
1 Mafuta echisaririra
2 Kusvibisa mumhepo nekugadzira simba kubva kugasi rechisikigo
4 Kusvibiswa kwemvura inoyerera
5 Kudengenyeka kwenyika
6 Izvo zvinogona kuitika
7 Zvinyorwa pane simba regasi rechisikigo
8 Kutsvaga chinotsiva gasi rechisimba simba
Natural gasi imafuta epasi, kunyangwe nyika ichiburitsa kubva mumoto wayo havasi vazhinji yedambudziko rekuti kana zvichikonzera marasha kana peturu.
Natural gasi inoburitsa 50 kusvika 60 muzana yakaderera CO2 painopwiswa mune nyowani gasi gasi simba chirimwa ichienzaniswa neyakajairika kuburitsa kubva kune yemarasha chirimwa. Izvo zvinoderedzawo magasi akaburitswa mudenga ne15 kusvika 20 muzana zvichienzaniswa neaya anokonzerwa neinjini yepeturu mumotokari.
Kupi hongu izvo iyo emissions inowanikwa mukuchera uye kuchera gasi gasi rezvisikwa kubva kumatsime uye kutakurwa kwaro kuburikidza nemapaipi zvichikonzera kusefa kwemethane, gasi rinotonyanya simba kupfuura CO2. Zvidzidzo zvekutanga zvinoratidza kuti methane emissions account ye1 kusvika ku9 muzana yezvose zvinobuda.
Kusvibisa mumhepo nekugadzira simba kubva kugasi rechisikigo
Natural gasi inoreva kuchenesa kupisa kupfuura mamwe mafuta, sezvo ichiburitsa mashoma sarufa, mercury nezvimwe zvikamu. Kupisa gasi rechisikirwo rinoburitsa nitrogen oxide, kunyangwe iri pamatanho epasi pane peturu nedhiziri rinoshandiswa mune injini dzemotokari.
10.000 dzimba dzeAmerica dzinoshanda Iine gasi rechisikirwo pachinzvimbo chemarasha, inodzivirira kuburitswa kwegore negore kwemazana chiuru nemazana matatu ematani eitrogen oxide, matani mazana matatu nemazana mapfumbamwe eSo1.900 nematani mazana mashanu nemazana maviri ezviuru. Kuderedza izvo zvinobuda zvinova hutano hweveruzhinji, sezvo izvo zvinosvibisa zvakabatanidzwa kumatambudziko akaita seasthma, bronchitis, cancer yemapapu, nezvimwe.
Kunyangwe paine izvi zvakanaka, kuvandudzwa kwesingawanzo gasi kunogona inokanganisa yemuno nedunhu mhepo yemhando. Kukwirira kwakanyanya kwezvinhu zvinosvibisa mweya zvakamboitika mune dzimwe nzvimbo uko kuchera kunoitika.
Kuratidzirwa kumatunhu akakwirira ezvinosvibisa izvi anogona kukurudzira matambudziko ekufema, matambudziko emwoyo uye gomarara.
Hydraulic kutsemura iri hunyanzvi hwekuwedzera kubviswa kwemafuta uye gasi pasi pevhu. Kubva muna 1947, mamwe mamirioni maviri nemazana maviri nezviuru ematsime akatsemuka akaitika pasirese, kusanganisira miriyoni imwe muUnited States.
Maitiro acho ane gadzira imwe kana yakawanda yakakwira nzira dzekubvumidzwa kuburikidza nejekiseni remvura yakadzvanya, kuitira kuti ikunde kupokana kwedombo uye ivhure kutsemuka kunodzorwa pazasi pechitubu, muchikamu chinodiwa chehydrocarbon ine kugadzirwa.
Iko kushandiswa kweiyi nzira kwakabvumidza kugadzirwa kwemafuta kuchawedzera ne45% kubva 2010, izvo zvakaita kuti United States ive yechipiri pakukura mugadziri pasirese.
Izvo zvinoonekwa zvakare kuti kukanganisa kwezvakatipoteredza kwemaitiro aya, iyo inosanganisira kusvibiswa kwemvura yakadzika, kunwa mvura kwakanyanya, kusvibiswa kwemhepo, kusvibiswa kweruzha, kufamba kwemagasi nemakemikari anoshandiswa pamusoro, kusvibiswa kwepamusoro nekuda kwekuteuka, uye zvinogona kuitika mhedzisiro yehutano kubva pairi.
Imwe yenyaya dzakakomba dzekutsvaira ndeye kuwedzera mumabasa ekudengenyeka kwenyika, Inonyanya kusangana neakadzika jekiseni jekiseni.
Kusvibiswa kwemvura inoyerera
Iine hydraulic kutsemuka kwetsime zvakakonzera kubuda kwemagasi, radioactive zvinhu uye methane kune inonwa mvura yekunwa.
Kune akanyorwa makesi emvura yemvura pedyo nematsime egasi ayo akashatiswa neanotsemura zvinwiwa pamwe nemweya, kusanganisira methane uye isina kugadzikana makemikari makemikari. Chimwe chezvikonzero zvikuru zvekusvibisa ndeche chivakwa chisina kugadzirwa kana matsime anotsemuka achibvumira gasi kuti idonhedze mukati memvura.
Mvura inoshandiswa mu hydraulic fracturing zvakare vasvika pamatsime akasiyiwa, pamwe chete nezvimwe zvakavharwa zvisina kukodzera, izvo zvinokonzeresa kuti aya emumvura ashatiswe.
Fracking yakabatanidzwa kune yakaderera hukuru kudengenyeka kwechiitiko chiitiko, asi zviitiko zvakadaro hazviwanzoonekwi pamusoro.
Kunyangwe iko kushandiswa kwemvura yakasviba paunenge uchizvibaya pane yakanyanya kudzvinyirira mukirasi II jekiseni matsime ane yakabatanidzwa nekudengenyeka kwenyika kwakakura kwazvo muUnited States. Inenge hafu yekudengenyeka kwenyika kwakakura 4.5 kana kupfuura kwakarova mukati meUnited States mumakore gumi apfuura kwakaitika kumatunhu uko kutsemuka kunoitika.
Chidzidzo chitsva chakaburitswa muna2016 uye chakaitiswa nechikwata chema geologist uye seismologists kubva kuTexas Methodist University yekuSouth uye United States Geological Survey, yakaratidza kuti jekiseni remvura yakawanda yakasanganiswa pamwe ne kuburitsa brine kubva pasi pevhu mumatsime Gasi rakapera ndiro raikonzeresa kudengenyeka kwenyika makumi maviri neshanu kwakanzwikwa nevanhu veAzer, Texas, pakati paZvita 27 uye chitubu 2013, uko kwavakange vasati vambobatana nekudengenyeka kwenyika.
Izvo zvinogona kuitika
Kunze kwekuwedzera kwekudengenyeka kwenyika, makemikari makemikari anoshandiswa muiyi nzira anogona inosvibisa zvese ivhu nemvura pasi pevhu, maererano neBritish Royal Society mu2012.
Iwe unogona zvakare kuwana matatu mapepa esainzi akaburitswa muna2013 anoenderana pakuratidza izvozvo kusvibiswa kwepasi pevhu kubva pakukanda hazvigoneke panyama. Izvo zviri pachena ndezvekuti kuitira kuti zvirege kuitika, akanyanya mashandiro maitiro anofanirwa kugara achiitika. Zvinoitika kuti izvi hazviwanzo kuitika, saka pane dambudziko rakakura rekusvibisa nzvimbo dzepasi pevhu.
Zvinyorwa pane simba regasi rechisikigo
Kune akatiwandei zvinyorwa izvo kupokana kwakajeka kunogona kuwanikwa kukwikwidza saJosh Fox's Gasland. Mune izvi zvakaburitsa pachena matambudziko ekushatiswa kwemvura iri pedyo nematsime ekuburitsa munzvimbo dzakaita sePennsylvania, Wyoming neColorado.
Chinhu chinonakidza icho chaive indasitiri yemafuta uye gasi inotambira izvozvo akabvunza avo vakaunganidzwa mufirimu Fox kuitira kuti webhusaiti yeGasland irambidze zvirevo zvakaitwa neboka revatambi.
Imwe firimu inonakidza Nyika Yakapikirwa., yakapihwa naMat Damon pamusoro penyaya ye hydraulic fracturing. Zvakare mu2013, Gasland 2 yakapihwa, chikamu chechipiri chedhizaimendi umo maanosimbisa mufananidzo wake webhizimusi gasi, umo achiritaridza senzira yakachena uye isina njodzi yemafuta, inhema zvechokwadi. Kubuda kwenguva refu uye kusvibiswa kwemweya uye kwemvura pakupedzisira kunokanganisa nharaunda uye kuisa mamiriro ekunze panjodzi nekuda kwekubuda kwemethane, ine girinihausi ine simba.
Kutsvaga chinotsiva gasi rechisimba simba
Nezvose izvi zvataurwa, iyo gasi rechisikigo harina kuchena kudaro sekuyedzwa kwayakaitwa kuratidza, asi mukuita kwayo inoburitsa zvinosvibisa mudenga sezvinoitika panoshandiswa nzira yekutsvaira.
Ndokusaka zviri nyore kuti uzive chokwadi icho chakakomberedza gasi gasi simba uye ramba uchimanikidza zvakanyanya kune mamwe magetsi izvo zvakachena zvakakwana uye zvinogadzikana nekufamba kwenguva zvakaita semhepo kana zuva, kunova ndiko kwatinofanira kuenda kuitira kuti nyika ino igare yakachengeteka uye irine ruzha.
Mafuta ese aya anoenderana ne zvisaririra zvinotitungamira kune iyo Paris Climate Summit umo nyika zhinji dzaifanirwa kutora dzimwe sarudzo kuti dziise gore rinouya mune imwe iyo simba rinowedzerwazve rinofanira kuve chinangwa chikuru.
Iwe unoda kuziva here kuti chaiyo gasi boilers ari uye kuti anoshanda sei? Usapotsa ichi chinyorwa:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Chaizvoizvo Simba » Natural gasi simba rinogadzirawo kusvibiswa
Diana Alvarez akadaro
Adriana ndakafarira chinyorwa chako uye ndinoda kuchishandisa pazvinyorwa zvangu, unogona here kundipfuudza data rako kuti ndikunongedze nenzira kwayo uye nezuva rawakaburitsa chinyorwa ichi. Ndatenda
Pindura kuna Diana Alvarez
Vatengi vatsva veFracking muChiapas, mabhazi anomhanyisa gasi rechisikigo, uye vashoma vanoziva kukanganisa kwezvakatipoteredza kunosanganisira munyika, kunyangwe ichitakura "ECO" muzita rayo. Hydraulic fracturing inoparadza hunhu hwenyika yedu
Dambudziko guru remapoka ezvakatipoteredza munyika ino kushayikwa kwedzidzo yehunyanzvi uye kushomeka kwehunyanzvi hwekuita nharo mumagakava avo. Izvo zvakakosha usati watarisana nehunyanzvi kana kushandiswa kwesimba, kuti unyatsoiziva, kana zvisiri sezvandambotaura, nharo dzinoshaya hunyanzvi hwehungwaru uye nekudaro chero huchokwadi.
Iyo gakava rakakosha chose, nzanga inofanirwa kuve nekuziva uye kusimudzira kwazvino hakugone kukanganisa kukura kwezvizvarwa zvinotevera, asi kusaziva uye kutya hakugone kumisa budiriro yazvino.
Gasi rechisikirwo parinopiswa rinoburitsa 1/5 yekubuda kweCO2 iyo inogadzirwa nemarasha anopisa, zvirokwazvo haisi 100% yakachena asi iri sarudzo iri nani.
Ndezvekunyepa kuti hydraulic kutsemuka kwakakosha pakuburitsa gasi rechisikigo, zvinogona kuitika nenzira yakajairika kana dura rikatendera, uye izvi zvakaitwa kusvika zvino.
Chekupedzisira, kusadzora kwemethane emesi panguva yekugadzirwa kwegesi chaiyo kunoedzwa kudzikiswa zvakanyanya sezvazvinogona, izvi zvinonzwisisika, kana kambani inoburitsa ichishandisa mari hombe pachigadzirwa tsime, chekupedzisira chairi kuda ndechekuti chinhu icho chako chiongorore. zvinokunzvenga. Zvakadaro, dzimwe nguva hazvidziviririke, asi kudzikamisa izvi muzvirimwa zvinogadzira matochi anopisa iyo inopukunyuka methane (inokuvadza zvakanyanya uye ine greenhouse mhedzisiro kakapetwa ka8 kupfuura CO2) kupinda CO2, ine yakaderera zvakanyanya greenhouse mhedzisiro.
Kudziya kwepasi pose idambudziko rakakomba kwazvo rekutarisa, uye kuburitswa kwemweya we greenhouse kumhepo kunofanirwa kuderedzwa zvakanyanya. Pachezvangu, ndinotenda shanduko yakananga kusosaiti ine yakaderera uye yakadzika kabhoni kubuda mazinga kusvikira yasvika 0. Asi izvo munguva pfupi yakaoma uye zvakakosha kuve nehasha mukukakavadzana uye nekufunga mhando dzinonakidza kwazvo.
Pindura kune ssslabb
Carlos Fabian akadaro
Manuel Ramirez rega ndikutaurire kuti chinyorwa chako chakanyatsonaka, ndakafunga kuti gasi "rechisikirwo" harina kunyanya kusvibisa asi ndave kuona rakasiyana zvachose, zvinorwadza kuti mvura inobairwa sei, yeizvi.
Wataura chokwadi pamusoro pesimba remhepo, asi izvi zvakare zvine zvazvakanakira nekuti kana vawana nguva refu yechando simba iri rinopera, zvino ndoda kukubvunza kuti ndezvipi zvimwe zvisarudzo zvisina kusvibiswa zvatinga shandisa?
Pindura kuna carlos fabian
Ndatenda nekutaura kwako Carlos!
Pindura Manuel Ramírez
Maria Morinigo akadaro
kuchengetedza nharaunda kuzvitarisira isu pachedu
Pindura kuna maria morinigo
QualityConsulting Kubvunza akadaro
Yakanaka theme uye yakanaka poindi ... zvese zviri fossil hazvingambove zvakasvibira
Pindura kune Consultoria QualityConsulting
Ichokwadi igasi rechisikigo asi harikuvadzi (ndizvo zvinofungwa nevanhu). Asi mafuta echisaririra zvinoreva kuti apera uye akasvibiswa
Daniel Martinez Olivo. akadaro
Kuburitswa kwechinyorwa kwacho kwakanaka kwazvo. Ini ndinonyorera kune vashoma vanofarira «kubva kumhuri yeiyo nhangemutange», nezve greenhouse mhedzisiro uye kudziya kwepasirese kunotibata isu tese uye pakupedzisira zvinotiuraya kuti tirege kuzvimisa pakutsvaga kutsvaga pfuma kusingazotorerwe nemunhu guva asi kuti hongu iro richasiya richidzoka, kubatana kwacho kuchisvibisa nyika. Izvi zvakanditungamira kuti ndisimudzire munguva pfupi iri kutevera chirongwa chakakosha chemagetsi muDominican Republic, kutanga nekudonha kwemahara kwemvura kubva kuCaribbean Giravhiti negiravhiti mune yekutanga nhanho kuburikidza nemataneru ane epasi-anodonha anti-corrosion turbines, uye mune yechipiri danho riine huwandu hwakaenzana hwemvura kuburikidza nepassage kuburikidza neiyo huru reverse osmosis muchina kamuri, iyo yakaiswa mudura hombe ichaburitsa iyo yechipiri nhanho. Mvura inoguma yatove kumamita 44 pazasi pegungwa (mumupata weLa Bahía de Neiba) ichaitwa maindasitiri uye anoshandiswa kudyiwa uye agro-indasitiri pamwe nema chloride nezvimwe zvigadzirwa zvinozotorwa neelectrolysis senge goridhe remamorekuru, nezvimwe ..
Pindura kuna Danilo Martinez Olivo.
Alexander ocampo akadaro
Ndinoda kuziva kuti nderipi remaviri aya magasi, propane uye echisikigo, rinogadzira yakawanda kabhoni monoxide painopiswa?
Ini ndinobvunza nekuti ini ndaigara ndichishandisa bhodhoro repropane gasi uye nguva pfupi yadarika ndachinja kuenda kumba gasi chairo.
Kubva pandakachinjira kune gasi rechisikigo, ndaona imwe hwema hwekupisa hunondiita dzungu, izvo zvisina kuitika kwandiri pandakashandisa propane. Ini ndinonzwisisa zvakare kuti c. haina hwema ... mumwe munhu angandibatsira?
Pindura kuna Alejandro ocampo
Mangwanani akanaka, unogona kundipa ruzivo rwako kuti ndikwanise kukuendesa kuchikamu chekutsvaga kwangu. Ndatenda
rega kuputa ne laser malaga akadaro
Inonakidza blog. Ini ndinodzidza chimwe chinhu kubva kune yega webhusaiti mazuva ese. Zvinogara zvichinakidza kugona kuverenga zvimwe zvemunyori. Ndinoda kushandisa chimwe chinhu kubva pane yako post pawebhusaiti yangu, zvakasikwa ini ndinosiya chinongedzo, kana iwe ukanditendera. Kutenda nekugovana.
Kupindura kurega kusvuta ne laser malaga
Luis Antonio Riano akadaro
Manheru akanaka ndiri kuita ongororo nezve kusvibiswa kwe gasi rechisikigo uye chinyorwa chako chandafarira, unogona here kundipa iyo data rekunongedzera kuferefetwa kwangu.
Pindura Luis Antonio Riaño
ok dick zvaive zvisina basa kwandiri: v
Pindura kune zaid
MARITZA MORALES akadaro
Manuel Ramírez, ndakafarira chinyorwa chako pa "gasi rechisimba simba rinogadzirawo kusvibiswa" uye ndakaifarira uye ndinoda kuishandisa pfungwa yangu, unogona here kundipfuudza data rako kuti ndikunongedze nemazvo uye nezuva rawakaburitsa chinyorwa ichi. Ndatenda
Pindura MARITZA MORALES
Iyo TS haisi kuzomisa iyo inotevera okisheni yezvinodzoreredzwa